Amadoda ase-Free State angongoqo | Scrolla Izindaba
Amadoda ase-Free State angongoqo
Usuku Lwezithandani ngokwesiko usuku lapho amadoda ethenga izimbali, oshokoledi futhi ejabulise izintombi kanye nabalingani bawo.
Kodwa kulo nyaka, amanye amadoda e-Mangaung akhethe ukujoyina i-Stingy Men Association – ngeziqubulo zawo ezithi: “Ungabaniki lutho” kanye nokuthi “Ake ngibone ukuthi yini engingayenza”.
Amalungu azotholwa esebenzisa imali kubantu besifazane kuzoba nemiphumela.
Abakwa-Scrolla.Africa bahlangane nala madoda e-K-la-K car wash e-Mangaung athi ayazijabulisa futhi ajabulela ukungasebenzisi imali kubantu besifazane.
Ilungu, uSthembile Mehlo utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi: “Ngonyaka odlule ngisebenzise imali elinganiselwa kwizi-R14,000 ngoSuku Lwezithandani.”
Uthe, kwakubandakanya ukudla kwasekuseni endaweni yokudlela bese kubhucungwa umzimba, ukuyothenga kanye nesidlo sasemini endaweni yokudlela ephezulu e-Bloemfontein ngaphambi kokuchitha ubusuku ehhotela elihamba phambili.
“Kodwa lokho bekungokokugcina,” kusho uSthembile.
“Njengamanje nginozakwethu futhi siyazijabulela.”
Uthe, ukhulumile nomlingani wakhe futhi uyakuqonda ukuthi uyilungu le-Stingy Men Association.
“Ngosuku Lwezithandani oluzayo ngizobona ukuthi yini engingayenza!”
Okhulumela usoseshini uThami Kopane uthe, bafuna ukunciphisa ukusetshenziswa kwemali.
Uthe, ngesikhathi isiqubulo esithi “Bangabaniki lutho” sisuka ezinkundleni zokuxhumana banqume ukuthi bawusebenzise lo mbono.
“Sinethemba lokuthi sizoyikhulisa lento ize ifinyelele ezingeni likazwelonke,” kusho uThami.
“Sizobheka izitatimende zasebhange zomunye nomunye ukubona ukuthi akukho yini okwenziwayo okusolisayo.”
Uthe, amalungu azobanjwe ephana ngemali angeke avunyelwe ukuba ilungu izinyanga eziyisithupha bese eyahlawuliswa. Bazobe behamba bezikhipha kodwa ilungu elizobanjwa ngeke lihambe nabo.
“Sibheke ukusebenzisa imali evela enhlawulweni ezintweni ezifana namathawula enhlanzeko nezinye izinto ezenzelwe izingane zesikole.”